Madaxweynaha Kenya iyo raisul wasaaraha Itoobiya oo isla falanqeeyey xaaladihii ugu dambeeyey Somalia | Salaan Media
Madaxweynaha Kenya iyo raisul wasaaraha Itoobiya oo isla falanqeeyey xaaladihii ugu dambeeyey Somalia
Madaxweynaha dowlada Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay raisul wasaaraha Itoobiya Haile-mariam Desigln oo booqanaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Kulankaas ayey labada masuul iskula soo qaadeen arrimo ay ugu weyn tahay xaalada Somalia gaar ahaan sidii la isaga kaashan lahaa xoojinta la dagaalanka Al-shabaab iyo taageerada dowlada Somalia.
Itoobiya iyo Kenya ayaa ah labo dal oo xuduudo dhaadheer la wadaaga Somalia, waxaana ka jooga gudaha dalka kumanaan askari oo qaarkood ay ka tirsan yihiin AMISOM, waxayna gacanta ku hayaan magaalooyin badan oo ay kala wareegeen xoogaga Al-Shabaab, kuwaasoo ku yaala bartamaha iyo Koonfurta Somalia.
Madaxweynaha Kenya Uhura Kenyatta ayaa sheegay in dawladiisa iyo tan Itoobiya ay danaynayaan Soomaaliya oo nabada ah in la arko, isagoo xusay in dhibaato walba oo ka taagan Somalia ay iyaga saameyneyso, iney wax ka xaliyaana baahi loo qabo.
Raisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu shaaciyay in dagaaladii Somalia sanadaha badan ka socday ay saameeyeen wadamada dariska la’ah sida Itoobiya iyo Kenya sidaas darteedna ay hada iska xil saaraayaan nabadaynta hormarka iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay in labada masuul ay xili badan ku bixiyeen ka hadalka iyo lafa gurida xaalada Somalia, ayna isku aragti ka noqdeen xal u helida xaalada Somalia iyo taageerada ay siinayaan dowlada Somalia.